RAE inonyevera uye inoda kupedza kushandiswa kwe 'vagari' | Zvazvino Zvinyorwa
Joaquin Garcia | | Noticias, dzakawanda
Mumakore achangopfuura, kushandiswa kwekusarudzika kwevanhurume nevanhukadzi kwakatanga. Iko kushandiswa kunoenda kupfuura kwetsika tsika. Saka vazhinji vanozviona zvakajairika uye kwakaringana kushandisa vese vakomana kana ivo vachida kunongedzera kuboka.
Hazvina kujairika kunzwa izvo zve "vakomana nevasikana", "vese uye vese" kana "vazhinji uye vazhinji" kupa muenzaniso wakapusa. RAE yakazivisa izvozvo kushandiswa kweshoko iri kunopesana netsika yemitauro uye inofanira kusvika kumagumo kana mashandisiro ayo ari emutauro chete.
Iyo RAE inoyeuka kuti iyo tsika inoratidza kuti mune yekureva boka zita rekubatanidza rakajairika rinofanira kushandiswa kwete munhu wacho. Mune akawanda emakesi aya mubatanidzwa generic inopindirana neyechirume fomu, nekudaro kuvhiringidzika kwevakawanda pavanenge vachishandisa, asi tingave tichida kana kwete, iro generic zita ndizvo zvazviri uye hazvigone kuchinjwa.
"Unogona kushandisa vese vanhurume kana uchida kuratidza kana kutaura nezvavo", sekureva kweRAE
RAE zvakare inotaura izvozvo vakomana vaviri chete ndivo vanofanirwa kushandiswa kana iwe uchida kujekesa kana kutaura nezvavo, semuenzaniso: "chirwere ichi chinobata vakomana nevasikana vezera iro." Chero zvazvingaitika, kurwa kweRAE kunenge kwakaoma uye kuchinetsa nekuti parizvino tine zviitiko zvakawanda zvekushandisa zvisirizvo, munzvimbo dzine kurima kudiki uye munzvimbo dzinotarisirwa ruzivo rwakanyanya rwemutauro uye zvakadaro vanosarudza kusvetuka kutonga nekuti "inofinyirwa."
Muenzaniso unoshamisa kwazvo wekupedzisira unowanikwa mune inozivikanwa "AMPA" yezvikoro. Mune ino kesi, vese vakomana vari kushandiswa kana mubatanidzwa uri "Vabereki". Hongu, ndinoziva kuti zvakare murume uye zvinonzwika kunge zvemaziso, asi hatigone kuchinja mazwi nekuti tinoafarira kana kwete. Uye zvichiri kushamisika kuti sangano riri padyo nenyika yekudzidzisa rakachinja pasina kushorwa kubva kuvadzidzisi vanofanirwa "kudzidzisa."
Kune mienzaniso mizhinji uye mashandisiro acho haasarure, saka zvirokwazvo zvirinani kuti RAE ichinje mutemo pane kuyedza kuishandisa nemazvoNekudaro, zvinogara zvakanaka kuona kuti inzvimbo yekare yakadai inoramba ichishanda mumabasa ayo: Yakachena, isa uye penya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » RAE inoyambira uye inoda kupedza kushandiswa kwe 'vagari'
Freddy c belliard akadaro
Zvakanaka. Ini ndaigara ndichiziva kuti iko kushandiswa kwevanhurume vazhinji kunotonga vese vanhukadzi, uye kamwe kamwe ini ndinozviwana ndave nehukama hwepamusoro ndichiita chikanganiso chakadai. Zvinoita sekunge havana kana kugamuchira Spanish kuchikoro.
Pindura kuna Freddy C Belliard
Selena Moreno akadaro
Ummm asi "vakomana nevasikana" ava "vagari nevagari" "vese uye vese" vakaita kuti vaoneke kune vese vanhukadzi ... uye vakaonekwa neGender Kuenzana munharaunda ... tinodzokera kumashure zvekare uye neayo iwo echikadzi zvinonzwisiswa.
Pindura Selena Moreno
Carlos Xavier Contreras akadaro
Chinangwa chemutauro kuendesa pfungwa dzisinganzwisisike pakati peavo vanotaura, nenzira inoshanda uye isinganetseke. Nekushandisa vese varume kana vakadzi kutaura kune mubatanidzwa, tinovanza zvirevo, uye zvinoita kuti zviome kunzwisisa pfungwa dzatinotaura. Munyika yangu, Venezuela, iyo mitemo yakanyorwa mumakore gumi nemasere kana gumi nemapfumbamwe apfuura yatora tsika isingataurwe yekutaura "vakomana nevasikana", "vese vagari, uye vese vagari", "vashandi" nemataurirwo akafanana, kakawanda vakasungwa imwe mushure chimwe chacho. Kunyangwe vanhu vakadzidza vanopedzisira vave nekunetseka kunzwisisa zvinorehwa, pakati pemashoko mazhinji asina basa asingawedzere chinhu pane zvinoratidzwa. Hainzwiki zvakanaka, uye zvinoita kuti zviome kunzwisisa zvatinotaura kana kunyora.
Zano rakasiyana asi rakabudirira riri kushandiswa nemaAmerican mukushandisa kwavo Chirungu. Ivo vanongoshandisa chikadzi chechikadzi kureva kune pamwe chete. Zvinonzwika kusanzwisisika pakutanga, asi kana tangojaira, zvishuwo zvine chikonzero chekuenzana kwevakadzi zvinogona kuremekedzwa, pasina kuvharidzira zvinoreva.
Pakupera kwezuva, zvingave zviri nani kutevedzera mirawo yemutauro wedu, nekuwana kuenzana kwevanhurume nevanhukadzi kuburikidza nemitemo nedzidzo, pane kutsanangura shanduko dzemitauro dzisingavimbisi shanduko chaiyo. Mushure mezvose, isu vanababa hatigumbuke kana kusaoneka kana mumwe munhu achiti isu tiri vevanhu, kunyangwe vari vanhukadzi sei.
Pindura Carlos Javier Contreras
Janeth ma akadaro
Carlos, ndinokutendai nemhinduro iyi, ndinobvumirana newe, nguva pfupi yapfuura ndaona nekusuwa kukuru kuti ndivo vakadzi vamwe chete vanosarura nemashoko akadai; Hongu, kuenzana kwevakadzi kuri nani kutsvaga nemitemo, dzidzo uye kuzviremekedza.
Pindura kuna Janeth Ma
Kleber Navarrete Jara akadaro
Janeth Ma, ndinotenda kuti uri mukadzi akangwara, mukadzi asina kuwira muhunhu hwevakadzi hunoseka uye husingaruramise chero chinhu. Ndinovimba vamwe vakadzi vanofunga senge iwe uye usaite zvakaipa zvakashata.
Pindura Kleber Navarrete Jara
Raphael Minda akadaro
Mumutauro wechiSpanish huwandu muhurume hunoreva vakadzi vaviri (mukadzi nehurume)
Ndosaka zvichinzi vadzidzi vanotaurwa zvisirizvo nekuti mudzidzi ndiye munhu anodzidza, angave murume kana mukadzi uye tikashandisa mutemo wevakawanda vechirume (vadzidzi) zvinoreva vakadzi nevakadzi vanodzidza.
Pindura Rafael Campos
Kuenzana Nyanzvi akadaro
Huye, RAE zvakare inokurudzira kuti usashandise izwi mu "chete" uye iwe unorishandisa. Sekutaura kwechikoro nguva nenguva, basa rayo harisi rekumanikidza kushandiswa kwemutauro, asi kuutora. Naizvozvo, kana huwandu hwevatauri vasingazive nevanhurume vega vanomira kuushandisa, RAE ichafanirwa kutora isiri-yechikadzi yekushandisa. Uye harisi basa ravo kumanikidza kutaura kwatiri. Kana, zvirinani, ndizvo zvavanotaura pavanofarira ...
Pindura kune Kuenzana Nyanzvi
Izwi rekuti "chete" rinoenda nemazwi kana ratsiva "chete", mune dzimwe nguva harina matauriro ...
J. Alfredo Diaz akadaro
Ini ndatoguta ne "vagari" uye "varume nevakadzi vatevedzeri", kungotaura vaviri chete. Carlos, ndinofunga kuti parizvino uchave waona kuti kune avo vasingade kunzwisisa, hapana tsananguro yakakwana.
Pindura kuna J. Alfredo Díaz
Kana iwe uchifarira kwazvo kudzivirira mutauro, dzidza kunyora. Chinyorwa chakazara nezvikanganiso zvemarudzi ese. Kupa muenzaniso: "RAE inotaurawo kuti vakomana vaviri ava vanofanirwa kushandiswa chete kana vachida kuratidza kana kutaura nezvavo", kusawirirana, izvo zvinovashungurudza zvakanyanya.
"Panyaya iyi vakomana vaviri vechirume vari kushandiswa," kumwe kusawirirana. Uye ini handienderere mberi nekuti ndaizoshaya nzvimbo.
«… Zvisinei, zvinogara zvakanaka kuona kuti sangano rekare rakadaro rinoramba richishanda sei pamabasa aro: Kuchenesa, kugadzirisa uye kupa kubwinya.»
Chekare chinyorwa chako chose. Zvekare uye zvinosiririsa kuyemura mashandiro ekuchenesa, kugadzirisa uye kupa kubwinya sekunge chiri chimwe chinhu chinodiwa nemutauro kubva kunzvimbo yakadaro.
Neraki, mutauro hauna hanya zvakanyanya nezvinotaurwa RAE uye ichaenderera munzira, ichichinja zvichienderana nehondo dzetsika dzinoitika munharaunda.
Carlos ndinobvumirana newe, kuti isu tinoshandisa murume kana murume neimwe nzira hazvireve kuti isu tinoda kutora kodzero kana mabasa kubva kuvanhu. Uye zvechokwadi, mutauro wese unowanzo kurerutsa nehunhu, saka kurebesa mitsara, mazano uye / kana kutaura nevakomana vaviri hazviite chero pfungwa. Kwaziso nekutenda nekuverenga.
Mutauro unesimba uye tinofanira kuvhurika kune mashandisiro matsva awo Pamwe nekuti pane syncretism semhedzisiro yetsika fusion (chiitiko chiri kukura semhedzisiro yekutama) kana nekuda kwekuti zviitiko zvitsva zvinogadzirwa zvisina kufungidzirwa muchimiro chekutanga.
Pamusoro pezvo, tiri kuenda panguva inoitwa kuyedza kutsigira kuenzana kwevanhukadzi, uye tsika iyi haiite zvinoenderana nezvinangwa izvi.
Mutauro unoshanduka, nzanga ine simba. Kuda kudzivirira izvozvo hakusi kuchenjera.
Carla Vidal akadaro
"Inofanira kusvika kumagumo"? Izvo "kubva" hazvina basa ... Kunze kwekunge iwe uri kusahadzika, asi mune izvo zvingave zvakanyorwa zvakashata. Uye zvinoita kunge zvakakomba kwandiri pane peji rinodzivirira kushandiswa kwakakodzera kwemutauro wedu wakapfuma. Ndinovimba unozvigadzirisa. Ndatenda
Pindura Carla Vidal
Ini ndinofungidzira kuti kunze kwacho kunochengeterwa "munhu anoita chipfambi" uye "munhu anochengeta imba", anozoramba ari "pfambi" uye "madzimai epamba". Isu pane yedu saiti uye Ivo pane zvavo, sezvazvinofanira kuve. Nei izvo zviviri zvakasiyiwa? Izvo zvine chekuita nenhoroondo, zvine chekuitawo nenhoroondo yekuti generic iri murume?
Zvino, kana varume vatanga kuita "vatariri" ivo vanotoitwa "mushandi anofamba nendege" kuitira kuti vasazopfuura nekunyadziswa uko kunosanganisira kuve mukadzi. Zvinoenderana neRAE, munodaidza sei vanogamuchira vahosi vari varume?
Ndatenda zvikuru nekubatanidza kune chinyorwa "Iyo isina kuzivikanwa jenda", Álvaro. Ndakaifarira zvekuti ndakaprinta mu pdf kuitira ramangwana.
Roy solis akadaro
Zvinotaridza kwandiri pachezvangu kuti kushandiswa kwemutauro unobatanidza hakushandirane nemutauro nekuti unouita wakashata uye zvakare hauna basa. Maitiro acho kudzikisira, kwete kuwedzera. Nekudaro, ini ndinogovana neavo vanoishandisa, kuti zvakanaka kusimbisa kuenzana kwevakadzi. For that alone ndakamira kumushoropodza.
Pindura Roy Solis
Munyika yangu, varume vanoita basa remutariri vanonzi vanoshanda ndege.
Fabiola Trasobares akadaro
Kutonhora. Vaya vane "mutauro" wemaziso vanondishungurudza zvakanyanya. Handisati ndambonzwa kusarurwa nekuti "vadzidzisi" vataurwa, uye ndizvozvo.
Ndinoda kuziva kuti vadziviriri vakaomarara vemagumo maviri vanotaura sei pavanenge vaine tapas neshamwari. Handikwanise kuzvifungidzira, imi mabhora madiki.
Pindura Fabiola Trasobares
Iziar Marquiegui akadaro
Zviri kwatiri isu vanhu vanoshandisa mutauro pamwechete kugadzira mutauro; uye vadzidzi vemutauro vanofanirwa kuenda nesu kugadzirisa kusawirirana kunobva mukushandisa ikoko. Mazuva ano, vatauri vazhinji vanoda kuti generic ibatanidze vese varume kana vakadzi. Naizvozvo, ndinogona kuonga kana iyo Academy ikakwanisa kupa mhinduro inogutsa.
Pfungwa yangu ndeye generic mu "e": "vadzidzisi", "vatengesi", "vadzidzi", vadzidzisi "," vatambi ", maartist", vanhu ". Neiyi nzira, vanhu vese vanonzwa vachisanganisirwa, kunyangwe vanhu vanoita transgender.
Ndine chokwadi chekuti, kana vakaomerera pakuvateerera, vadzidzi vanokwanisa kuzadzisa zvatinoda nenzira yekusika uye inogamuchirwa yevatauri vese.
Pindura Izar Marquiegui
Javier Otero akadaro
Ndokumbirawo, zvakakwana zvemaziso mazhinji, nerusarura zvisina maturo uye zvimwe zvakanaka zvakafanana!
Ikozvino zvinoitika kuti avo vasina kusiyanisa ndeavo vanoita bonde, kuti RAE inzvimbo isingamire uye yakapera basa uye zvimwe zvinyonganiso zvakafanana zvakataurwa zvakatenderedza pano ...
Ngatione kana aya manyepo-mafambiro-mberi achida kutsvaga kamwechete uye zvechikadzi icho chisina kumakwa, kushandiswa kwechirume haku sarure chero munhu uye haasi maziso.
Sekutaura kunoita valvarez de Miranda zvakanaka kwazvo muchinyorwa chake, murume haasi iye ega chinhu chisina mucherechedzo chemutauro: ndozvakaitawo mumwe achipesana neuwandu (muvengi anofambira mberi - vavengi-, imbwa - imbwa nematinji- murume shamwari yepamwoyo…; ndizvo zvazvino, zvakatarisana nezvakare nezvichazoitika: Columbus anowana - akawana - America muna 1492, mangwana kuchave - kuchave - nekirasi, nezvimwewo.
Kune rimwe divi, kune asingaverengeke epicene mazita ari echikadzi: chisikwa, munhu, akabatwa, chimiro, mukurumbira; nemasangano mazhinji / masangano ari zvakare: Navy, Civil Guard, iyo Academy, nezvimwe. Handisati ndambonzwa chero munhu achichemera kudenga nekuda kwe "rusarura" zvinogona kureva kuti aya mazita ari echikadzi.
Vakadzi vazhinji vakapenya (Soledad Puértolas, Maruja Torres, Ángeles Caso, Carmen Posadas, Rosa Montero, Almudena Grandes, Soledad Gallego-Díaz, Carmen Iglesias, Margarita Salas, pakati pevamwe) vakashandisa murume semurume asina kuzivikanwa munhaurwa dzavo dzeunganidzwa. yePlaneta Awards, kupinda muChikamiro cheSainzi Sayenzi, mumagwaro avo, nezvimwewo, pasina kunzwa kusarudzika.
Asi hongu, zvinonyanya kukwezva uye nezvematongerwo enyika kukwirisa huku nekuda kwesarudzo yemutauro maererano nehunhu husina kuzivikanwa.
Muenzaniso ndeuyu, wakatorwa muBulletin yeRoyal Spanish Academy uye yakataurwa naIgnacio M. Roca paBumbiro reVenezuela:
«VaVenzuelan chete nekuzvarwa uye vasina imwe nyika vanogona kubata mahofisi eMutungamiriri kana Mutungamiriri weRepublic, Mutevedzeri Wemutungamiriri wenyika kana Mutevedzeri weMutungamiriri, Mutungamiriri kana Mutungamiriri uye Vachigaro veVatungamiriri kana Vatevedzeri veMutungamiri weNational Assembly, vatongi kana vatongi veDare Repamusorosoro. weJustice, Mutungamiri weNational Electoral Council, Gweta Gurukota reRepublic, Comptroller kana Comptroller General weRepublic, Gweta Gurukota reRepublic, Defender kana Defender weVanhu, maMinisita kana maMinisita emahofisi ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. , mari, simba nemigodhi, dzidzo; "Magavhuna kana maGavhuna nemaMeya emuganhu Nyika neMaguta uye yeavo anofungidzirwa muOrganic Mutemo weNational Armed Forces."
Iyi ndiyo here nzira yaunoda kutaurwa nezvayo kuti urege kuwira mukusarurwa? Iwe hauna chaicho chiri nani kuita here? Kana zvirizvo, ndinokurudzira kuti uverenge zvimwe, kuti utarise gwaro raIgnacio Bosque uye uve nepfungwa dzakavhurika zvishoma kuti uone kana njere diki nekubatana kunouya kwauri.
Pindura Javier Otero
Bhuruu Martinez akadaro
Seizvo RAE inosanganisa mazwi akawandisa atisina kumbofungidzira kuti angaonekwa, wadii kuisa mamwe mazwi nemaonero echikadzi? nekuti izvo zvisina kutumidzwa zita hazvipo, mwana wevanhu akachinja zvakanyanya kubva pakuonekwa kwemutauro sekuuziva kwedu, zvirokwazvo zvakakosha kuti vakadzi vapihwe mazita.
Pindura kuna Azul Martínez
Isu takatogadzirisa dambudziko uye hapana anosara.
Carlo Cianci. akadaro
Zvakaitika kwandiri muna 2010 pachikoro cheLa Salle. Apama kubva pakutanga akafunga kuti zvaireva mubatanidzwa wemubereki-mudzidzisi. Mushure memwedzi gumi ndichidzidzisa ipapo, ndezvekuti ini ndaiziva zvairehwa ne "kubatana kwamadzibaba naamai."
Pindura Carlo Cianci.